Yiziphi amathuluzi we-backlink angcono ongayisebenzisa ukuze uthole ijusi yokuxhumanisa lekhwalithi?
Ukuze uthole umphumela ongcono kakhulu kusuka ekukhuthazweni kwe-inthanethi, umnikazi wewebhusayithi kufanele azibuze ukuthi ufuna ukufeza kuphi. Uma unomgomo othile webhizinisi, kuzoba lula kuwe ukuthola izindlela zokufezekisa.
Wonke umnikazi webhizinisi ozothatha umsebenzi wakhe ngokujulile ufuna ukukwenza kahle. Ngalokho, sisho - isevisi engcono kakhulu nekhwalithi engcono kakhulu. Uma unquma ukusungula ibhizinisi lakho ku-intanethi, kuzomele ube nezinsizakalo ezinokwethenjelwa nezigunyazayo, okuqukethwe kwekhwalithi nokuhlelwa kwewebhu kahle nokwakhiwa kwesakhiwo.
Udinga ukuqala kusukela ekuqaleni uma ufuna ukuya e-TOP. Uma uqala ekuqaleni, into yokuqala udinga ukudala i-backlink yekhwalithi ye-website yakho. Kulesi sihloko, sizoxoxa ukuthi yiziphi amathuluzi we-backlink oyidingayo ukuze uthole izixhumanisi ezingcono kakhulu zangaphandle ezingeni lakho.
Konke okwenzayo futhi akudingeki ukwakha isixhumanisi
Okokuqala, ake sixoxe ngakho konke "okungabikho" okudingeka ucabange ngakho ukusetha umkhankaso wokwakha isixhumanisi ngendlela engcono kakhulu. Kufanele usebenzise kuphela othembekile futhi ohlobene namawebhusayithi wakho we-market niche ukuze ugweme ama-backlink angalimaza idumela lakho lesayithi futhi abange izijeziso ze-Google. Njengomthetho, izizinda ezixhumanisa okuqukethwe okungathembekile kumthombo wakho wewebhu zigaxekile. Yingakho kufanele ufune amawebhusayithi aqinisekisiwe futhi athembekile. Ngokwesibonelo, imithombo enjalo ye-web njenge-Wikipedia, i-Forbes, i-Amazon, i-Entrepreneur nezinye izizinda zamandla ezifanayo zinesimo esiphakeme kakhulu futhi ngesikhathi esifanayo senze sithembeke.
Uma ungafuni ukuthola izinhlawulo kusuka kunjini yokusesha, kuzomele ugweme ama-hyperlink angase ahlobene nezindlela zokwakha ama-black hat. Njengomthetho, lezi zixhumanisi ze-spammy zinokuqukethwe okufanayo, kuphela kwifomu ehlukile. Kungabangela amaphesenti amancane okuhlukahluka kusayithi lakho kanye neziqu zokuqukethwe.
Ukwakha umkhankaso wokwakha umxhumanisi wokuwina, udinga ukusebenzisa ezinye izindlela eziqinisekisiwe zokuthola ama-backlink, njenge:
ukwabelana komphakathi nokubhuloga
Ungakha i-akhawunti yebhizinisi kwesinye sezipulatifomu ezithandwayo zokuxhumana nabantu ezifana ne-Pinterest, Facebook, Instagram nokunye.Kuyithuba elihle kakhulu lokugqugquzela umkhiqizo wakho, ukuheha ithrafikhi ehlosiwe kusuka kumanethiwekhi omphakathi futhi ukwakha ama-backlink akhwalithi kusayithi lakho. Ukudala umkhankaso wokumaketha wezokuxhumana komphakathi, udinga ukunaka ngokukhethekile ukuthi ubani ozokunikeza ulwazi. Uma ufuna ukuthuthukisa ukuqwashisa umkhiqizo wakho nokuheha amakhasimende akho angakwazi ukuwenza ibhizinisi lakho le-intanethi, udinga ukuqondiswa ezilalelini ngezidingo ezifanayo eziqondene nomkhiqizo noma amasevisi wakho.
Ukubhuloka kungenye indlela enhle yokudala ama-backlink esemgangathweni kwisayithi lakho. Ukuze uzuze imiphumela emihle kulolu chungechunge, udinga ukuhlinzeka abafundi ngokuqukethwe okugxilwe ngokucwaninga okusekelwe ocwaningweni okuzoba nenzuzo ethile kubo. Izixhumanisi ozitholayo ngokubhuloga zimeleleka njengoba ungaziphatha.
Ungakhuthaza usesho oluthile olusetshenziswa kabanzi njengezifundiswa njenge-s. izizinda ze-edu zingakulethela amakhasimende amaningi angakapheli esikhathini esifushane ongabhala nge-niche ethile ephezulu futhi ukwandise ukuthandwa kwakho kuwebhusayithi ngesikhathi esisodwa Source .